FMI – Vondrona eoropeanina : miandry fanasaziana amin’ny kolikoly, trafika andramena, … | NewsMada
FMI – Vondrona eoropeanina : miandry fanasaziana amin’ny kolikoly, trafika andramena, …
Na navoitra aza ny ezaka tsara vitan’ny mpitondra, lafin-javatra andrasan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) ny vokatra azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly. Nanao fanamarihana toy izany koa ny Vondrona eoropeanina. Efa nilaza ny Bianco fa misy tokoa ny ahiahy amin’ny “kolikoly” amin’ny trafika andramena, tao amin’ny Jirama, sns, matoa nampiakatra ny raharaha eny amin’ny rafi-pitsarana Chaine pénale, saingy tsy hita ny sazy hatramin’izao.
Miandry ny rehetra! Efa ela nanaitra ny sain’ny mpitondra ny sehatra samihafa teto amin’ny firenena sy ny iraisam-pirenena, mikasika ity kolikoly manjaka eto Madagasikara ity. Anisan’izany, ny Sefafi, ny Transparency international, ny Alliance Voahary Gasy (AVG), …, miampy ny fitarainana etsy sy eroa ataon’ny vahoaka Malagasy olon-tsotra. Anisan’ny fepetra takin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fahazoana vokatra azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly, ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko any ivelany ny harena voajanahary (andramena, sokatra, soavalindriaka, sns).
Mafana ny andramena
Ny tena mahamenatra, tsy nijanona teto an-toerana, ka tsy afaka saron-tsaronana, na afenim-penina toy ny raharaha hafa ireo voalaza ireo, fa malaza eran-tany, fantatr’izao tontolo izao, eny, hatrany amin’ireo rafitra iraisam-pirenena, toy ny Interpol, ny Cites, sns mihitsy aza.
Nambaran’ny filohan’ny AVG, Razakamanarina Ndranto, fa efa an-taonany maro ny trafika andramena, nanodidina ny 1.000 m3 isan-taona. Niakatra 7.000 m3 isan-taona izany nanomboka ny taona 2009, nandritra ny Tetezamita, fa ny taona 2014 (efa nisy fanjakana ara-dalàna) vao tena nirongatra, nahatratra 12.000 m3!
Araka ny voalaza etsy ambony, tonga hatrany ivelany ny raharaha, manana raharaham-pitsarana mikasika fanondranana andramena any Singapour i Madagasikara. Minisitra roa mbola am-perin’asa, manao fanambarana mifanipaka. Nangatahana ny nanafoanana ny raharaha ny desambra 2015, saingy vao mainka tsy nanaiky ny fitsarana any Singapour (tena mampiseho ny fahaleovantenany), ary hiakatra amin’ny volana avrily izao ny tohiny.
Fahafahana vonjimaika ny “raharaha Bekasy”
Raharaha mafana faharoa eny amin’ny fitsarana koa ny “Raharaha Bekasy”. Maro ny feo mikasika ity mpandraharaha ity. Ny fantatry ny besinimaro farany, notazonina am-ponja vonjimaika izy, taorian’ny fandefasan’ny Bianco ny raharaha teny amin’ny rafi-pitsarana Chaine pénale. Nanamafy ny Bianco fa ahiana misy tokoa ny “’kolikoly” sy ny “famotsiam-bola” amin’ity raharaha ity. Taty aoriana, tsy nambara ampahibemaso intsony, fa nomen’ny fitsarana fahafahana vonjimaika ilay mpandraharaha, ary afaka nivoaka tany ivelany.
Omaly, nilaza ny filohan’ny AVG, fa raha ny nambaran’ny fitsarana, “tsy voakasiky ny tsy fahazoana mivoaka ny sisin-tany izy, ary toa efa niverina tany Antsiranana, ny desambra 2015 teo”.
Famatsiana solika ny Jirama
Raharaha mafana fahatelo, ahiana nisy kolikoly avo lenta koa ny famatsiana solika tao amin’ny Jirama, nandritra ny fotoana maromaro. Maro ny tompon’andraikitra teo aloha tao amin’ity orinasam-panjakana ity sy ny fianakaviany, miampy mpandraharaha vitsivitsy voarohirohy, araka ny antontan-taratasy tany am-pelatanan’ny Bianco. Nampanantsoina teny amin’ny “Chaîne pénale”, saingy tsy nisy notazonina am-ponja vonjimaika, tsy fantatra intsony ny tohiny, mandraka ankehitriny.
Nanome toky koa ny tompon’andraikitry ny Jirama ankehitriny, sy ny minisitera miahy azy, fa hamoaka ny valin’ny fanadihadiana anatiny (audit), saingy tsy nisy tohiny ihany koa hatramin’izao. Namerina nitaky an’io ny sendikàn’ny mpiasa Gem ao amin’ny Jirama, andro vitsy lasa izay.
Fitsarana manokana andramena?
Nilaza tokoa ny mpitondra fa hiady mafy amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny trafika andramena. Nankatoavin’ny Antenimierampirenena ny fananganana ny fitsarana manokana, nandritra ny fivoariambe novambra-desambra 2015. Hatramin’izao, tsy fantatra ny mpikambana ao aminy. Tsy hita ny didim-pitsarana nivoaka, fa raha raisina ny vokatra “aotra ny fanagadrana”.
Nampahafantarina ren-tany sy ren-danitra koa, fa nahazo sambo haingam-pandeha miaro sisin-tany, avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Hatramin’izao, tsy mbola niasa ilay sambo, fa raha ny zava-nisy ny febroary 2014, sambo vedety haingam-pandeha roa niaraka tamin’ny helikopitera, nanaraka ilay sambo “Min feng” tany avaratr’i Sainte-Marie, saingy haingam-pandeha kokoa noho ireto farany angamba ilay sambo vaventy nitondra andramena, matoa tafatsoaka? Fantatry ny mpamatsy vola sy ny vondrona iraisam-pirenena avokoa ireo raharaha ireo, ary azo inoana fa misy koa hafa aza!